DFS oo billaabaysa qorshe cusub kadib shirkii New-York |
DFS oo billaabaysa qorshe cusub kadib shirkii New-York
Shirkii 47-aad ee Qaramada midoobay oo ay yeeshaan Gudiga Dadka iyo horumarintooda oo ay soo abaabushay Qaramada midoobay ayaa lagu qabtay Xarunta Qaramada Midoobay ee New York.
Waxaa Shirkan ka soo qeyb Wafdiyo ka kala socda caalamka oo dhan waxaana kala matalayeen xubno isugu jiro wasiiro, Agaasimayaal iyo Diblomaasiyeen iyo Madaxda ururada waaweyn ee la shaqeeyo Xafiisyada qaramada midoobay.
Shirka oo lagu soo gabagabeeyey ayaa waxaa dalka soomaaliya u mataleyey Dibloomaasi sare (Minister-Councillor) Cawaale Cali Kullane oo khudbad ka jeediyay shirka,isagoo sheegay in soomaaliya ay ka shaqeynayso horumarinta dadka soomaaliyeed,iyadoo marka la hormariyo xaaqijinta amniga si hufan loogu tala jiro taaba galinta iyo dardargalinta barnamijyada lagu hormarinayo Caafimaadka,wax barashada iyo daryeelka guud ee shacabka soomaaliyeed iyo horumarintaa aqoonta iyo ummada soomaaliyeed.
Waxaa uu mudane Kullane shirka ka sheegay in dowlada soomaaliyeed ay ku talo jirto tirakoobka shacabka soomaaliyeed,xaqijinta iyo xoojinta xogta laga aruuriyo baahida aqooneed iyo mida daryeel ,si loo bilaabo qoshe ku dhisan tira koob sax ah, iyo in waxqabadka barnamijyada ay si hufan ugu faafaan dalka oo idil.
Sidoo kale waxaa uu mudane kullane xusay in daryeelka iyo horumarinta ummada ay tahay hadafka ugu horeeya oo ay donayaan madaxda dalka qaasatan Madaxweyne Federaalka Soomaaliya Mudane Xassan Sheekh Maxamuud iyo Raisul Wasaaraha Dowlada Federaalka Soomaaliyeed Mudane Cabdiwali sheikh Axmed Maxamed.